A na-enweta mkpụrụ osisi oroma site na osisi nke na-amị amị. Osisi oroma dị ụtọ dị obere karịa osisi oroma ilu, na-enwe obere ma ọ bụ enweghị obere. Osisi ndị a bara uru na-amị mmanụ dị mkpa oroma na mmanụ oroma ifuru dị mkpa.
Mmanụ oroma dị ụtọ nke nwere mmanụ ụtọ dị ụtọ dị ka oroma nke esi na ya wepụta, ma nwekwuo ume ma sie ike. Mmanụ oroma dị mkpa nwere mmanụ edo edo, limonene, a na-ejikwa ya maka uru ya na-ewuli elu ma na-akasi obi.
Ugbo ezinụlọ a nwere acres 350. Mpaghara a na-erite uru site na mmiri mmiri na afọ, mmiri bụ isi mmiri maka osisi Osisi 5,000 nke ugbo ahụ.
Ugbo ahụ jikọtara ebe obibi na-echebe ma na-ewughachi anụ ọhịa ndị dị egwu. Ugbo a na - eji naanị mkpụrụ GMO nke akọ.Mmanụ oroma dị mkpa sitere n'ubi a enwetala etiti na-esi ísì ụtọ.
Obi dị anyị ụtọ na anyị na ndị na-ebubata ihe na Brazil na-emekọrịta ihe ogologo oge, ndị nke aka ha na-enye ndị ọrụ ugbo ahụ ego ha mgbe niile.
Osisi Site Ugbo A:
Mmanụ Ala Dị Mkpa Lemọn | Mmanụ oroma mmanụ oroma | Osisi Osisi Osisi Dị Mkpa
Ochie Pastasa, Ekwedọọ
Otu ọrụ AromaEasy na-akpali bụ owuwu ụlọ a na ụdị ọgụ mmiri kachasị agba. Taa, ihu igwe na-ekpo ọkụ nke Guayaquil na-enyere aka ịkọ ahịhịa ala 1,800 nke ala na-eme nri, afọ owuwe ihe ubi n'afọ. Ugbo a nwere osisi Eucalyptus dị ukwuu, ọtụtụ lemongrass, na ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa na-eme obodo.
Eucalyptus mmanụ dị oké mkpa sitere na epupụta, nke nwere ezigbo isi. Ndị na-achịkọta ihe na-achịkọta akwụkwọ nke osisi eucalyptus ndị na-abanye, wee rụọ ọrụ mgbagharị uzuoku site na iji nkeji AromaEasy.
Ebumnuche eucalyptus anyị na-akwado ndị na-anakọta ma na-eme obere ihe nke akwụkwọ Eucalyptus, bụ ndị na-eji ego agbakwunyere na-akwado ezinụlọ ha.
Mmanụ na ngwaahịa nke ugbo:
Lemongrass Mkpa mmanu | Mmanụ Eucalyptus Dị Mkpa